Iindaba -Zama ngokwakha umqobo wokhuseleko kwimpilo yoluntu ezidolophini
Cofa kwifowuni ephathekayo ukwenza ngokuthe ngqo ixesha lokuvavanywa kwe-asidi ye-asidi, ukuhlawulwa kwe-Intanethi, isampulu yesiza, emva-kwe-inyani yeselfowuni kwiziphumo zemibuzo ekwi-Intanethi… Phakathi ku-Novemba, iShanghai "yeLifu yeLifu yeNyukliya yokuVavanya ukuBhaliswa kweNgxelo 2.0 ″ Yasungulwa ukuze isebenze kwezoqoqosho ngendlela ekrelekrele, esebenzayo nenokulandeleka. Isantya sokubuyiselwa koluntu siwomelezile umgca wokuthintela ubhubhane wedolophu.
Ubhubhane wesithsaba omtsha ubetha kunye "nemidyarho" ngokuchasene nentsholongwane. Uthotho lwemisebenzi emitsha engazange ibonwe iya kukhawulezisa ngokuthe ngcembe kwi-2020. Ukubhaptizwa kwemfazwe "ubhubhane" kuye kwabenza abantu bazi kakhulu ukuba inkqubo yezempilo yoluntu yinxalenye ebalulekileyo yokuqinisekisa impilo yabo bonke abantu.
Unyaka okhethekileyo, imisebenzi ekhethekileyo! Iseshoni yeshumi leminyaka yeKomiti yeQela leShumi elinanye yeQela likaMasipala ebibanjwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo igxininise isidingo sokwenza umsebenzi oqinileyo ekugqityweni kwesiCwangciso se-13 seminyaka emihlanu kunye nokuqala kwesiCwangciso se-14 seminyaka emihlanu. Xa sijamelene nobhubhane wale meko, siza kuhlala sigcina inqanaba eliphezulu lokujonga, ukuphendula ngokwenzululwazi, ukuphendula ngokuthe ngqo, kunye nokuphunyezwa ngokuchanekileyo komgaqo-nkqubo, ukuqhubeka ukomeleza ukuthintela ubhubhane kunye nokulawula kunye nokuphendula ngokungxamisekileyo, kwaye senze umsebenzi oqinileyo "Igalelo lokhuselo lwangaphandle kunye nokhuselo lwangaphakathi lwangaphakathi".
Uyilo olutsha luyatsalwa, kwaye uhambo olutsha luyaqala. Inkqubo yezonyango neyempilo eShanghai ijongene nomsebenzi wayo, kwaye yenza yonke imizamo yokwakha isithintelo sempilo yoluntu ngobulumko bolwazi, indlela yokuphendula, kunye nesibindi sokufuna utshintsho, ukwakha umgca wokuzikhusela wabantu ubomi, kunye nokubhala ixesha elitsha "isixeko, yenza ubomi bube ngcono Isahluko esitsha" esihle ".
Ukuphucula ukujonga phambili kunye nokwakha inkqubo yezempilo yoluntu epheleleyo
Nge-1 kaNovemba, "iMigaqo kaMasipala waseShanghai kuLawulo lweMpilo kaRhulumente oluQelekileyo" yaqala ukusebenza. Ukusuka ekubekeni iliso kunye nesilumkiso kwangexesha ukuya ekuphenduleni ngokungxamisekileyo, amava asebenzayo adlulileyo afinyeziwe kwizahluko ezili-10 nakuma-85 amanqaku. Ukuseka inkqubo yolawulo olungxamisekileyo yezempilo yoluntu "yokuthintela kuqala, uxolo kunye nemfazwe zidityanisiwe", iShanghai, isixeko se-mega, ihlala isakha umzi okhuselayo woluntu ongqongqo kunye noqinileyo. Eli ikwangumgaqo wokuqala weli lizwe wokuthintela nokulawula ubhubhane.
Ukuthintela ubhubhane eDacheng kufuna impendulo ekhawulezileyo nechanekileyo, kunye nenkxaso yeziko. Emva kwexesha ngoJanuwari 20, 2020, iShanghai yaxela imeko yokuqala eqinisekisiweyo yenyumoniya entsha yenhliziyo; ngoJanuwari 24, ku-Eva woNyaka oMtsha, iShanghai yaphehlelela indlela yokuphendula ephambili yezempilo engxamisekileyo. Ukuqhambuka kwemfazwe "ubhubhane" kukhokelele kutshintsho kwinkqubo yeqondo elinzulu. Nge-7 ka-Epreli, iShanghai yabamba inkomfa yoluntu yokwakha ezempilo kwaye yakhupha "Izimvo ezininzi zokuphucula inkqubo yothintelo kunye nolawulo lwezifo eziphambili kunye nokuphucula inkqubo yoLawulo lwezeMpilo kaRhulumente" (ebizwa ngokuba yi "Shanghai 20 Public Health Construction"). Intlanganiso ichaze ngokucacileyo: Ngo-2025 iShanghai iya kuba sesinye sezixeko ezomeleleyo kwinkqubo yezempilo yoluntu.
"Silwa ngenkuthalo nalo bhubhane, kwaye siyakwamkela kwaye sikhuthaza ukwakhiwa ngokutsha kunye nokuphuculwa kwenkqubo yezempilo yoluntu ezidolophini, kwaye sizama ukutshisa umkhondo wolawulo lwezokhuseleko lwezempilo loluntu." UNjingalwazi uLuo Li, uNobhala weQela weSikolo seMpilo kaRhulumente kwiYunivesithi yaseFudan, uxelele oonondaba. “Ingqiqo” esemva kokwakhiwa kwenkqubo ethile yolawulo loluntu kwezokhuseleko kwizixeko ezikhulu ixhomekeke koku: Okokuqala, ugxininiso kuthintelo kukufezekisa isilumkiso kwangethuba ngolawulo olubukhali nolugqibeleleyo lwezifo nenkqubo yezempilo yoluntu. Okwesibini, ukufuna "ukwenzeka zero" akuhambelani nenyani. Ke ngoko, xa kuvela iimeko ezinqabileyo, indlela yokucima "idangatye" ngesona santya sikhawulezayo kwaye ngexabiso elincinci kunye nokugcina ukusebenza okuqhelekileyo kobomi bezentlalo nezoqoqosho yinto ekufuneka ilandelwe yile nkqubo.
"Ngokombono wangoku, uthintelo lwethu ngqo kunye nolawulo kunye nokulahlwa ngokukhawuleza kwamatyala akhawulezileyo sele ebonakalisile ukusebenza ngempumelelo kokuphuculwa kwempilo yoluntu kunye nolwakhiwo." U-Luo Li uthe kwidabi lokulwa nesifo esitsha sesibetho inyumoniya, iShanghai ineenkampani ezili-117 kuso sonke isixeko. Iiklinikhi zeFever kunye neeklinikhi ezingama-200 zomkhuhlane woluntu ziye zadlala indima ephambili. Ukujonga phambili kwikamva, ukwakha "udonga lobhedu kunye nentsimbi" kuthintela ubhubhane esixekweni kunye nolawulo, ukusuka ekuphuculeni inkqubo yezempilo yoluntu ukuya kulwakhiwo lweenkqubo zoluleko kunye neetalente ezinje ngokusuleleka, izifo zokuphefumla, kunye namayeza okunyamekela iya kuba ngumsebenzi wexesha elide, ofuna unyamezelo. Ukwenza, kuyimfuneko ukomeleza uyilo olujonge phambili kunye nokuyilwa kwesicwangciso, kunye nokuqonda inyathelo lomsebenzi.
Ukuhlangabezana ngokuchanekileyo neemfuno zabantu kunye nokukhawulezisa inguqu yesibhedlele i- "Smart Digital Hospital"
Iseshoni yeqela yabonisa ukuba kufuneka sikhuthaze ngokubanzi ukuguqulwa kwedijithali kwezixeko. Utshintsho lwedijithali lwezixeko sisihloko esitsha kraca, ubunjineli benkqubo, egubungela yonke imiba yemveliso yasezidolophini, ubomi, kunye ne-ecology, kubandakanya uqoqosho lwedijithali, ubomi bedijithali kunye nolawulo lwedijithali.
Ukukhawulezisa inguqu kwidijithali kunye nokwakha izibhedlele "ezikrelekrele" yinto abantu abayifunayo ngoku. Ngokwezibalo zamva nje, izibhedlele ze-Intanethi ezingama-43 eShanghai zisungule iinkonzo zokuxilonga nokunyanga i-Intanethi, kwaye “iinkonzo zononophelo ze-Intanethi +” zisalingwa kwizithili ezi-4 kubandakanya iChangning, iJing'an, iPutuo nePudong.
Kwi-Xuhui District Central Hospital, kuba yaba sisibhedlele sikarhulumente sokuqala eShanghai ukufumana ilayisensi yesibhedlele ye-Intanethi ngoFebruwari kulo nyaka, ukubonisana ngonyango kwi-Intanethi, "ilifu" lokubonisana, intlawulo yeinshurensi yezonyango kwi-intanethi, kunye nokuhanjiswa kwamayeza ekhaya kufezekisiwe kwesi sibhedlele. Ukusukela nge-27 kaNovemba, "Isibhedlele iXuhuiyun" sele ifumene ngaphezulu koogqirha abangama-35,000 kwaye ikhuphe imigqaliselo engama-6,557. "Ukubona ugqirha ekhaya ngaphandle kokushiya ikhaya" kuye kwaba yinto yemihla ngemihla kubantu abaninzi nangakumbi.
“Ngenxa yenkxaso kuthotho lwemigaqo-nkqubo, iSibhedlele iXuhuiyun siphumelele ngokucacileyo. Okwangoku, umndilili wenani lothethathethwano olwenziwa kwi-Intanethi ngosuku ngama-400-500, kwaye umgangatho wokubonisana nawo wenze umtsi wokulunga: ukubonisana kwezempilo okumbalwa kuyinto encinci, kwaye ibango leenkonzo zokhathalelo lwempilo lolona luqhelekileyo. Ngamafutshane, into esiyenzayo 'yimpilo nje yeemfuno' zabantu abaqhelekileyo kunye nokusombulula uthotho lweengxaki ezibonakalayo. ” utshilo uZhu Fu, umlawuli olawulayo weSibhedlele esiyiNtloko seXuhui.
Ukuphuhliswa kunye nokusetyenziswa kwedatha yezonyango sele ingene kubomi babemi baseShanghai. Emva koqhambuko, "ikhowudi kunye nesicelo" yaba "sisimo esisemgangathweni" sabemi baseShanghai ukuba bahambe, ezingakhange zenze kube lula kubemi kuphela, kodwa zinciphise uxinzelelo kuthintelo nolawulo lobhubhane olusisiseko. Njengesiqalo esibalulekileyo "sothungelwano olunye ukuvula" kunye "nolawulo olunye olumanyeneyo lomnatha", esi sicelo sisungulwe ngokukhawuleza asizange sime “kumanyathelo afanelekileyo”, kodwa siqhubekile ukwandisa iimeko zokwenza isicelo, siguqula ikhowudi yenkonzo yabemi ephathekayo icandelo lolawulo lukarhulumente kunye neenkonzo.
Kwiklinikhi yokunyanga engalaliswayo ye-East Hospital ye-Renji Hospital, U-Li Li waya emgceni wefestile yobhaliso kwaye wafumanisa ukuba uyangxama ukuphuma ekuseni kwaye khange eze ne-inshurensi yakhe yezonyango. Ukumangaliswa kwakhe kukuba isibhedlele sisungule umsebenzi omtsha wokuxhasa "ukulahla intengiselwano" kwikhadi leinshurensi yezonyango, oko kukuthi, sebenzisa ifowuni ephathekayo ukufaka isicelo sesatifikethi seinshurensi yezonyango kwi-Intanethi. Emva kokuba isicelo siphumelele, skena ifestile ngekhowudi ye-QR kwaye umamele kuphela u "di" Ngesandi esinye, ukubhaliswa kwe-inshurensi yezonyango kugqityiwe.
Enkosi "kwiNkonzo eNye yeNethiwekhi" yokuphehlelela "Into eNye yeNtlawulo yezoNyango", "Faka iKhowudi" kunye "neInshurensi yezoNyango ye-Inshurensi yoNyango", kwaye ngoku abemi baseShanghai banokusebenzisa "Faka iKhowudi" ukufaka isicelo sobhaliso kwizibhedlele zikarhulumente. kuwo wonke umzi. Unyango, ukuhlawula kunye nezinye iinkqubo.
Ukuphendula kwiimfuno ezizodwa "ezingadibaniyo" zezifo ezosulelayo, kuya kukhuthaza ukuguqulwa kwezibhedlele ezibonakalayo zibe "zizibhedlele zedijithali ezikrelekrele". UZhu Fu uxelele oonondaba ukuba iqonga leSibhedlele iXuhuiyun lisaqhubeka. Kwixesha elizayo, iinkonzo zonyango ze-Intanethi ziya kuthi gqolo ukuhlangabezana ngokuchanekileyo neemfuno zabantu, kwaye ziphonononge utshintsho olunzulu kunye nabasemagunyeni abalawulayo kunye namaqonga wetekhnoloji.
Ukujongana neYangtze River Delta kwaye ujongene nelizwe liphela, ngokuqhubekekayo ukuphucula inqanaba lenkonzo yezempilo
Ukuphela konyaka, kukho isiqwenga seendaba ezimnandi ezenza abantu bonwabe: IShanghai igqibile ukwenza imisebenzi yonyaka ngaphambi kweshedyuli ekupheleni kuka-Okthobha ngowama-26 amaphulo asebenzayo kamasipala kwiindawo ezili-10 kulo nyaka.
Ukuthatha inyathelo elidlulileyo lokucwangcisa uyilo, qhubeka ujolise ngamandla kulawulo lwenkqubo, ukuze abantu babenenzuzo yokwenyani. Iiprojekthi ezibonakalayo zikamasipala ezingama-26 zibandakanya: ukongeza iibhedi ezingama-7,000 zabantu abadala, nokwakha uluntu olutsha olungama-50 ngokubanzi njengamaziko enkonzo amadala; Iindawo zokutya ezilungiselelwe abantu abadala ezingama-200, zihlaziye iibhedi ezingama-2 000 zokunyamekela abantu abakhubazekileyo abanokuqonda; kutshintshwe indawo ezilishumi elinanye (120) ezisandula ukwakhiwa; zongezwe izikhululo zempilo ezikrelekrele ezili-100, njalo njalo. Emva kwala manani lulangazelelo lwabantu kunye nolindelo lomgangatho ophezulu wobomi.
Isekwe eQingpu, ikhonza iYangtze River Delta, kwaye ijongene nelizwe liphela, ngo-Okthobha i-24, isibhedlele se-Intanethi i-Yangtze River Delta (eShanghai) saqala ukusebenza. Ixhomekeke kwinkxaso yeshishini yeSibhedlele saseZhongshan esihambelana neYunivesithi yaseFudan kwaye isekwe kulwakhiwo lweZhujiajiao People's Hospital kwiSithili saseQingpu ukudibanisa izixhobo zonyango ezikumgangatho ophezulu kwingingqi yeYangtze River Delta. , Ukuphucula inqanaba lenkonzo yezempilo kuMmandla waseYangtze Delta Eco-Green uPhuhliso oluHlanganisiweyo loPhuhliso, kwaye siqhubeke nokuqhuba uphuhliso lwamayeza akrelekrele, ulungiselelo lwezonyango, i-inshurensi yorhwebo, kunye nokhenketho lonyango kwiYangtze Delta Zone Demonstration.
Isibhedlele i-Yangtze River Delta (eShanghai) esibhedlele se-Intanethi sigqibe isigaba sokuqala sokwakha, kwaye kukho izicwangciso zesigaba sesibini sokwakha. UWu Jinglei, umlawuli weKhomishini yezeMpilo kaMasipala waseShanghai, xa ethetha ngombono wexesha elide weSibhedlele i-Yangtze River Delta Internet, ukhankanye ngokuthe ngqo ukuba unethemba lokuba esi sibhedlele, esazalwa sinezinto ze-Intanethi, siza kugxila kumava abaguli, sincamathele ukubaluleka konxibelelwano, kwaye usebenze nzima kweli candelo lokulinga itekhnoloji yonyango. "Qhubeka uphulaphule amava abantu abaqhelekileyo kwezonyango, kwaye uhlale uphucula imodeli yenkonzo, ukuze ube yindawo yokubonisa ngobuchule kwiYangtze River Delta, ilizwe liphela naseAsia, ekhokelela kuphuhliso lwexesha elizayo."
Ingqondo yonke imeko, khonza imeko iyonke, kwaye uvule umdlalo omtsha, ikamva linokulindelwa. Kule nyanga, njengenye yeeprojekthi eziphambili ze- "Healthy Shanghai Action (2019-2030)", isicwangciso sokuqala sokuvavanywa kwenkqubo yovavanyo lwelizwe sigqityiwe, esiya kuthi sivavanye inkqubo yezicwangciso eziphambili zophuhliso lwezoqoqosho nezentlalo, imigaqo-nkqubo , kunye neeprojekthi zobunjineli kwimpilo yoluntu. iimpembelelo. "Impilo idityaniswe kuzo zonke izicwangciso", iShanghai iyaqhubeka nokusebenza kwaye isebenze kunye ukukhusela impilo yabantu.